स्पेनमा एप्पल भुक्तानी, टच बारका लागि अनुप्रयोगहरू, आईम्याक हज विफलता र अधिक। म मा म बाट मा हप्ता को सबै भन्दा राम्रो म म्याकबाट हुँ
स्पेनमा एप्पल भुक्तानी, टच बारका लागि अनुप्रयोगहरू, आईम्याक हज विफलता र अधिक। म्याकबाट मा हप्ताको सर्वश्रेष्ठ
जोर्डी गिमेनेज | | एप्पल, स्याउ पे, हाम्रो बारेमा
हामी डिसेम्बर on मा छौं र यस्तो देखिन्छ कि वर्षको सबैभन्दा चिसो समय अन्तत: आइरहेको छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद केही स्थानहरूमा मौसम हामी अझै पनि वर्षको समयको लागि थोरै तातो छ जहाँ हामी छौं, तर यो हप्ता सबैको लागि महत्वपूर्ण भएको छ। बाँकी खबरको बाबजुद हामी मध्येका र यो हो स्पेनमा एप्पल पेको आधिकारिक आगमन। अन्तिम बुधवार, नोभेम्बर ,०, समाचार लीक इन्टरनेटमा र त्यो क्षणदेखि हामी सबैले हाम्रो अनुहारमा मुस्कान महसुस गरेका छौं किनकि यस्तो लाग्थ्यो कि त्यस समयमा हाम्रो देशमा सुरूवात नजिकै आएको थियो। अर्को बिहान खबर पुष्टि भयो र सत्य यो हो कि सेवा वास्तवमै राम्रो काम गर्दछ, अब हामीलाई यस द्रुत, सुरक्षित र सजिलो भुक्तानी विधिमा सामेल हुन अझ बढी बैंकहरू चाहिन्छ।
त्यसैले यो आइतवार हामी तपाइँलाई पहिलो लाइनमा छोड्छौं भुक्तानी को लागी सेटिंग्स म्याक र एप्पल पे मार्फत हामीले गत बिहिबार गरे। यसमा हामी देख्नेछौं कि कसरी कम्प्याटि cards कार्डहरू थप गर्ने र कसरी तिनीहरूलाई हाम्रो म्याकको साथ प्रयोग गर्ने जबसम्म यो कन्टिन्युटीसँग उपयुक्त छ।
हप्ता राम्रो सुरु भयो एप्पलले म्याकोस सिएरा बिटा develop विकासकर्ताहरूको लागि जारी गर्‍यो। यो भर्खरको बीटा संस्करणले केहि बग फिक्सहरू र विशिष्ट म्याक प्रदर्शन सुधारहरू थप गर्दछ, तर यसले थप गर्दछ fondos de pantalla यसले टच बारको साथ नयाँ म्याकबुक प्रो ल्याउँछ।
नयाँ एप्पल टोलीसँग सम्बन्धित हामी अनुप्रयोगहरूका बारेमा धेरै समाचारहरू देखिरहेका छौं कि थोरै मात्र म्याकबुक प्रोको टच बारको साथ अनुकूलता थप्न वा अनुकूलता थपेको छ। यस अवस्थामा परिचित म्याकका लागि Fantastical2अपडेट गर्दै थियो धेरै नवीनता संग जुन बीच यस OLED टच प्यानलको साथ अनुकूलता.
अर्कोतर्फ र अर्को चाखलाग्दो अनुप्रयोगको साथ हामी आजका लागि अनुप्रयोगहरू व्यवस्थित गर्दछौं, यो चिंगारी बारेमा छ, ईमेल क्लाइन्ट जुन रहन म्याकमा आउँदछ। यो एक अनुप्रयोग हो यो आईओएस मा लामो समय को लागी आएको छ र यस हप्ता यसले म्याकोस सिएरामा निश्चित छलांग पारेको छ।
अन्तमा हामी समाचार छोड्छौं iMac को कब्जामा कि कपर्तिनो फर्मका अनुसार आफैँ केही एकाइहरूमा असफल हुन सक्छ। एप्पलको दाबी छ कि बिक्रीमा राखिएको इकाईहरूमा यो विफलता हुन सक्छ डिसेम्बर २०१२ र जुलाई २०१ between बीच।
एप्पल पेको साथ आइतबार र किनमेलको आनन्द लिनुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » स्पेनमा एप्पल भुक्तानी, टच बारका लागि अनुप्रयोगहरू, आईम्याक हज विफलता र अधिक। म्याकबाट मा हप्ताको सर्वश्रेष्ठ
म्याक (II) मा सबै नयाँ आगमनको लागि आवश्यक अनुप्रयोगहरू
प्रत्येक म्याक नयाँ आगमनको लागि आवश्यक अनुप्रयोगहरू (I)